Qaramada Midoobay oo qirtay in aan Iran tayeynin Yuraaniyam-ka ay haysato - BBC News Somali
Qaramada Midoobay oo qirtay in aan Iran tayeynin Yuraaniyam-ka ay haysato
Warshadda nukliyeer Bushahr ee Iran
Warbixintii ugu horraysay ee ay wakaaladdu soo saartay tan iyo markii Maraykanku ka baxay heshiiskaa, ayaa IAEA waxay ku sheegtay in Iran aanay tayeynin macdanta Yuraaniyamka ay haysato oo aanay kor uga qaadin heer ka sarreeya intii lagu heshiiyey. Waxa kale oo wakaaladdu intaa ku dartay in kormeerayaasheedu dhamaan xeryaha dalkaas galaangal fiican u leeyihiin.
Go'aankii Madaxweyne Trump kaga baxay heshiiska iyo cunoqabatayntii uu ku soo rogay Iran ayaa waxay gebi ka laalaadiyeen mustaqbalka heshiiskaa.
Khamiistii ayaa Maraykanku waxa uu dhawr shirkadood oo Iran iyo Turkiga laga leeyahay ku daray liiska shirkadaha xidhiidhka la leh Iran, talaabadaas oo Maraykanku ku beegsanayey shirkadaha diyaaradaha Iran oo uu sheegay in ay xidhiidh la leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaas.
Markii Maraykanku maaganaa inuu ka baxo heshiiska nukliyeerka ee lala galay Iran, ayaa madaxweynaha dalkaas, Xasan Ruuxaani, wuxu isna ku hanjabay in dalkiisu diyaar u yahay in uu qaado talaabooyin la "filan karo iyo kuwo aan la malayn karin ba" hadii Maraykanku ka baxo heshiiska nukliyeerka ee dhex maray Iran iyo quwadaha waaweyn.
Ruuxaani oo khudbad ka jeediyey telefishanka dalkiisa ayaa waxa markaa yidhi "wakaaladayada tamarta nukliyeerku waxay heegan buuxa ugu jirtaa in ay qaado talaabooyin ay filan karaan iyo kuwo kale oo aanay malaysan karin", erayadaas oo loo qaatay in uu kaga hadlayey suurto galnimada uu madaxweynha Maraykanka, Donald Trump, dalkiisa kaga saari karo heshiiska nukliyeerka.
Warbixintan ay haatan soo saartay wakaaladda Qaramada Midoobay ee Quwadda Nukliyeerku ayaa waxa dadka lafa gura arrimaha nukliyeerka Iran iyo xidhiidhka dalkaasi la leeyahay reer Galbeedku, ay ku sheegayaan in uu yahay mid dhiirri hor leh siin doona dalalka reer Yurub ee u ololaynayey in aan heshiiskaa meesha laga saarin. Waxa kale oo uu noqonayaa mid guul u ah Iran oo qiraya in ay u hogaansantahay heshiiskii ay gashay, eedda la saari karaana aanay jirin.
Iran waxay had iyo goor sheegtaa in ay xaq u leedahay in ay hesho tamarta nukliyeerka, waxaanay ku nuuxnuuxsataa in barnaamijkeeda nukliyeerku yahay mid nabagelyo oo keli ah.